काठमाडौं । भोजनमा वा सलादका रूपमा खाइने प्याज स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । केही मानिस स्यान्डविच, चटनी तथा चाटका रूपमा पनि प्याज सेवन गर्छन् । तर प्याज त काँचै खाँदा..
जाडोमा बदाम खाँदा फाइदै फाइदा हुन्छ
काठमाडौं । जाडो याममा घाम ताप्दै बदाम खानुमा विशेष मज्जा हुन्छ। बदाम जति स्वादिलो हुन्छ, त्यसका फाइदा पनि त्यति नै छन्। बदाममा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइने भएकाले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई..
आजबाट कुष्ठरोग निवारण अभियान शुरु हुँदै
काठमाडौं । सरकारले कुष्ठरोग अति प्रभावित जिल्लामा आजबाट कुष्ठरोग निवारण अभियान शुरु गर्दैछ । कैलाली, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीमा अभियान शुरु गर्न लागेको कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । अभियान अन्तर्गत तालिमप्राप्त..
लमजुङका ५६ विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी
लमजुङ । लमजुङका ५६ विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १० विद्यालयमा पाँच जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् भने चालु शैक्षिक सत्रमा एउटा विद्यालयमा एक..
काठमाडौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले कूटनीतिक नियोग र विदेशी सम्बन्धनका विद्यालयहरू बन्द गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगले जथाभावी रुपमा खोलिएका त्यस्ता विद्यालयलाई थप नियमन गरी क्रमशः बन्द गराउन प्रारम्भिक..
शक्ति बढाउनका लागि पिउँनुस् यो एनर्जी ड्रिंक, धेरै फाइदा गर्छ
आयुर्वेदमा केसर हालेको दूध पुरुषहरूका लागि लाभदायक मानिएको छ । यसले गर्ने फाइदाका बारेमा थाहा पाएरै पुरानो जमानाका राजाहरू दिनदिनै केसर हालेको दूध पिउँथे । यसले सन्तानोत्पत्तिको क्षमता बढाउनुका साथै पुरुषहरूको..
गोलभेंडाको जुस पिउनुका फाइदा यस्ता छन्
काठमाडौं । गोलभेंडाले खानाको स्वाद बढाइदिन्छ र यसमा स्वास्थ्य बढाउने तत्त्व पनि भरपूर हुन्छ । सूप, सलाद र अचारमा गोलभेंडा उपयुक्त हुन्छ अनि यसले छालाको चमक पनि बढाइदिन्छ । गोलभेंडामा भएको..
प्याब्सन पूर्व अध्यक्ष डा बाबुराम पोखरेलको निधन
काठमाडौं । भीएस निकेतनका संस्थापक तथा प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डा बाबुराम पोखरेलको आज निधन भएको छ । मुटुरोगबाट पीडित डा पोखरेल आज बिहान ६:०० बजे शौचालयमा लडेपछि उनलाई उपचारका लागि बिहान..
ट्युमर ठिक पार्ने मोरिङ्गाको व्यावसायिक उत्पादन
काठमाडौं । ए–वान फार्म प्रालिले औषधीय गुणयुक्त मोरिङ्गा वनस्पतिको विक्री शुरु गरेको छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने सजिवन जस्तै देखिने बहुगुणी वनस्पति मोरिङ्गाको व्यवसायिक उत्पादन र प्रयोग नेपालमा पनि..
नेपालको औसत प्रजनन दर २.३, कुन प्रदेशका महिलाले कति बच्चा जन्माउछन ?
काठमाडौ । नेपालका महिलाहरुको औसत प्रजनन दर २.३ प्रतिशत रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक पाँच वर्षमा गरिने नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएचएस) ०१६ ले नेपालमा महिलाको प्रजनन..
ललितपुरको भैंसेपाटीमा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा ७५० शैयाको नेपाल मेडीसीटी अस्पताल स्थापना
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा ७५० शैयाको नेपाल मेडीसीटी अस्पताल स्थापना गरिएको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेका हुन् । बुधबार एनआरएनए..
काठमाडौं विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट चार अर्ब रुपैयाँ
धुलिखेल । प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको ७६ औँ सभा बैठकले आव २०७३–७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नाका साथै आगामी आव २०७४–७५ मा गर्नुपर्ने कार्यक्रम र..
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई परीक्षाको नतिजा शुक्रबार प्रकाशित भएको छ । नियमिततर्फ ४ लाख ४५ हजार ५६४ जना उत्तीर्ण भएका छन् भने एक्जाम्टेड तर्फ १६ हजार ५७२ जना उत्तीर्ण..
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकै पटक एघार संस्थाले पाए गाभ्ने र गाभिने स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ९ संस्थालाई अन्तिम स्वीकृति तथा दुईलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहित विभन्न एघार बैंक तथा..
Results 206: You are at page3of 7